AirPods Max wuxuu iibiyaa wax aad u yar sida ku cad Ming-Chi Kuo | Wararka IPhone
AirPods Max ayaa iibiya wax aad u yar sida uu sheegayo Ming-Chi Kuo
ka AirPods Max, sheygaas oo ah "premium" sida lagu muransan yahay ee xiisaha leh inuu si aad ah uga fog yahay daboolka marka loo eego warbaahinta takhasuska leh ee shirkadda, waana in dhagaha dhagaha ee gaarka ah ee shirkadda Cupertino ay soo saartay ay abuurtay jacayl iyo danayn la'aan qaybaha loo siman yahay.
Shaki nagagama jiro in kani yahay wax soo saar aad u fiican marka laga eego dhinaca farsamada, hase yeeshee… runti ma loo diyaariyey dadweynaha guud? Sida laga soo xigtay Ming-Chi Kuo, AirPods Max waxay ku iibinayaan qiimo aad u gaabis ah, wax walbana waxay muujinayaan inay sii wadi doonaan sidaas.
Sida laga soo xigtay falanqeeyaha, calaamadda ayaa maamuli doonta meel ku dhow hal milyan oo cutub oo ka mid ah sameecadaha dhagaha ee ugu qaalisan mustaqbalka, in kasta oo ay jirto xaqiiqda ah in aysan jirin tirooyin cayiman oo ku saabsan sida loo iibinayo xilligan. Waxa cad waa inay ku sii nagaanayaan meel aad uga fog guusha ay AirPods sii wadaan inay maleeyaan maanta, waxaas oo dhan gaar ahaan maalinta ka horreysa imaatinka jiilka seddexaad ee AirPods, sameecadaha dhagaha ee u muuqda inay doonayaan inay mar kale warshadaha "jeedsadaan" u rogaan.
Markaan u fiirsado xagga aragtida, aniga iima cada in natiijada ka soo baxday malaayiin iibiye sanadle ah oo alaab qaali ah oo aan macquul ahayn runti ay tahay natiijo xun, runti aniga shakhsiyan waa iga yaabisay. Kaliya maahan xaqiiqda ah in sicirkeedu sarreeyo, laakiin sidoo kale maxaa yeelay waa badeecad qaali ah, oo aan ku habboonayn dhagaystayaasha oo dhan iyo in lagu daro kaarka deynta wanaagsan wuxuu u baahan yahay dhego si caddaalad ah u fiican. markaa runtii waad ka heli kartaa dhammaan casiirka. Markaan fiirineyno guusha shakiga leh ee HomePod iyo sida Apple u go'aansaday inuu ku joojiyo jiritaankiisa habeennimo, ma caawin karno laakiin waxaan isha ku haynaa AirPods Max iyo mustaqbalkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » AirPods Max ayaa iibiya wax aad u yar sida uu sheegayo Ming-Chi Kuo
IOS, watchOS, iPadOS, tvOS, iyo macOS beta 4 oo loo sii daayay horumariyeyaasha
IPhone X oo ku dhex jira Jet Black midab ayaa la bilaabi lahaa